Farshaxanka gidaarka birta aluminium ee la caday ayaa si aad ah caan u ah, dad badana waxay go'aansadeen inay ku cusbooneysiiyaan qolkooda cuntada, qolalka fadhiga, iwm. Xitaa ma qiyaasi kartid inta waxyaalood oo qabow laga samayn karo aluminium. Waxay noqon kartaa qurxin yar ama farshaxan derbi weyn, oo ...
3D farshaxanka darbiga
Aluminium waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee loo isticmaalo ku dhowaad dhammaan qurxinta guryaha ee casriga ah. Aluminium wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo gacan ka geysta waa codsi caalami ah oo ku saabsan warshadaha iyo qurxinta guryaha. Mid ka mid ah adeegsiga suurtagalka ah waa farshaxanka farshaxanka gidaarka birta ah ee 3D, oo laga yaabo inuu yahay asal asal ah ...
Saacad derbi bir ah oo saddex geesood ah oo casri ah
Waqtiga la dhaafayo, hada saacaduhu si gaar ah uma ahan shaqeynta, kadib, meel walba oo aad u leexato waxaa jira taleefanka gacanta ama shaashadda kombiyuutarka oo si cad u soo bandhigeysa waqti sax ah. Saacadaha lagu soo bandhigay qoraalkan mid waliba waxay u keentaa qaab u gaar ah nooca Saacadahan derbiga birta ah waa mor ...
Ka shaqeynta saacad gidaar bir ah oo ka timid soosaaraha guriga ee qurxoon
Saacadan birta dhalaalaysa oo dhalaalaysa midabkeedu u egyahay oo kaliya uma muuqato mid si weyn loo sudhay darbiga, laakiin sidoo kale waa mid aad u deggan oo xasilloon sidoo kale. Haddii aadan jeclayn saacadaha shilinta badan, markaa tani waa saacadda kugu habboon adiga, maadaama ay ka muuqato 'dhaqdhaqaaq tallaabo hooseeya oo aamusnaan ah.' Saacadaha iyo daqiiqadaha throughou ...
Farshaxanka darbiga birta casriga ah
Ma jiraa derbi maran oo gurigaaga lagu qurxiyo? Haddii aadan aheyn ka dib rinji rinji ama sawir sawir leh, kafiiri qurxinta gidaarka birta ururintayda hoose. Waa beddel xiiso leh oo u beddelaya darbi madhan meel bannaan oo qaab gaar ah leh. Farshaxan qurux badan, jilicsan oo buluug ah. Mid ka mid ah ...
Fikradaha Qurxinta Birta Qurxinta
Haddii aad raadineysid fikradaha naqshadaynta darbiga gudaha ee qol gaar ah oo gurigaaga ah, qorshooyinka midabka ah ee aad rabto inaad sahamiso, ama aad si fudud ugu baahan tahay dhiirrigelin qaybo bir ah oo farshaxanno bir ah oo aad ku dari karto darbigaaga, qodobkan naqshadeynta darbiga gudaha talooyin ayaa laguu abuuray ....
Wareegtada Birta Wareegta ah
Dareenka qabow ee aluminium ee farshaxanka gurigeenna, waxaannu leenahay ururinta farshaxanno derbi bir ah oo wareegsan oo gurigaaga ku dhejin doona hab cusub oo xiiso leh. Qeybahaani waa kuwo qurux badan, oo ay sameeyeen farshaxan-yahannada xirfadleyda birta ah ee khibrada u leh in ka badan 10 sano, waana la isku ...
Ku qurxinta gurigaaga qurxinta darbiga birta
Markaad xulaneyso farshaxanka derbiga ee gurigaaga, farshaxanka birta qurxinta badanaa waa xulasho aad u fiican. Qaybahayaga qurxoon ee farshaxanka darbiga birta ah waxay ku yimaadaan noocyo iyo maaddooyin kala duwan oo kala duwan, waxaana loo isticmaali karaa si wax ku ool ah si loogu abuuro meel muhiim u ah qol kasta oo gurigaaga ka mid ah. Haddii qaabkaaga qurxinta ...
rinjiyeynta alwaaxyada aluminium ee la xoqay
Rinjiyeynta aluminium? Maxay tahay, haa! Rinjiyeynta ku dhejisan biraha, badiyaa naxaas, ayaa taariikh ahaan la duubay illaa Rembrandt kahor. Laakiin intii lagu jiray 20-kii sano ee la soo dhaafay, farshaxanyahannadeennu waxay tijaabinayeen alwaaxyo isku dhafan oo aluminium ah, kuwaas oo fudud oo leh dhisme ka sii xoog badan kaas oo ah 100% ...
Qurxinta gidaarka birta
Qurxinta darbiyadaada waa mid ka mid ah dariiqooyinka ugu dhaqsaha badan ee wax yar oo farshaxan ah lagu soo geliyo gurigaaga. Waxaan samayn karnaa qurxinta darbiga birta ah oo si qurux badan ugu habboon meel kasta oo bannaan. Qalabka farshaxanka ah ee farshaxanka biraha ah ee farshaxanka ah ee farshaxanka ah ayaa fududeyn kara qolka oo dhan iyo xitaa wadahadalo ka dhex dhaca jimcahaaga ...
Ubax ubaxa Lotus farshaxanka darbiga
Sida farshaxanka derbigu u socdo, 1-kan guddi ee looxanka rinjiga birta u sameeya waxtar badan. Muraayadaha biraha buluugga ah ee mugdiga ah, oo cabirkoodu yahay 60cm dherer ahaan, waxaa lagu qurxiyey ubax Lotus saafi ah oo ubaxsan iyo milicsi. Waxaa jira cunsur qurux badan oo qoto dheer oo ubaxuna u eg yahay saafi saaid ah oo qu ...
Ku qurxin gurigaaga Farshaxan darbi Bir ah
Waxaa jira siyaabo badan oo loo qurxiyo guriga gudihiisa. Dadka qiimeeya tayada ugu fiican, xarrago iyo xalalka aadka u shaqeynaya badanaa waxay raadiyaan qaybo gaar ah oo guryahooda ah. Farshaxanka darbiga birku wuxuu bixiyaa bayaan casri ah oo casri ah qol kasta. Dadku si ikhtiyaar ah ayey u isticmaalaan dhammaystirka biraha iyo wax aan ...